Arin Uu Sameeyay Frank Lampard Kadib Guuldarooyinkii Xidhiidhka Ahaa Ee Liverpool & Valencia Oo Xal Ugu Helay Dhibaatadii Kooxdiisa Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Arin Uu Sameeyay Frank Lampard Kadib Guuldarooyinkii Xidhiidhka Ahaa Ee Liverpool & Valencia Oo Xal Ugu Helay Dhibaatadii Kooxdiisa Oo La Ogaaday.
Kooxda Chelsea ayaa ka soo dhex baxday xaalad murugo badan lahayd oo ay ku jireen kadib guuldarooyinkii xidhiidhka ahaa ee kulamadii Valencia iyo Liverpool ee tartamada Champions League iyo Premier league.
Waxaa la ogaaday qaabkii uu Frank Lampard u xaliyay dhibaatadii kooxdiisa ka jirtay taas oo xal u noqotay in ay kaga soo baxeen waqtigii adkaa.
Wargayska Daily Mail ayaa shaaciyay in Frank Lampard uu qabtay shir khaas ah oo uu iskugu yeedhay ciyaartoyda khibrada leh ee kooxdiisa kadib guuldarooyinkii xidhiidhka ahaa ee Liverpool iyo Valencia.
Frank Lampard ayaa markaas ciyaartoyda khibrada leh ee kooxdiisa u ka dalbaday in ay isku taagaan sidii ay kooxda uga saari lahaayeen xaalada adag ee ay ku jirtay isaga oo dareemay in uu culays saarnaa ciyaartoyda da’yarta ah.
Shirkan uu Frank Lampard kula gar naqsanayay ciyaartoyda khibrada leh ee kooxdiisa waxaa goob joog ka ahaa caawiyihiisa Jody Morris waxaana la xusay in Willian iyo Pedro Rodriguez ay ku jireen ciyaartoyda shirkan khaaska ah layskugu yeedhay.
Kadib markii uu Frank Lampard si gaar ah ula shiray ciyaartoyda khibrada leh ee kooxdiisa ka tirsan ee uu u dhamaystiray wixii uu ka doonayay waxay bilaabeen in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan in ay kooxda ka caawiyaan sidii ay xaalada u badali lahaayeen.
Laakiin kadib shirkan waxay Chelsea soo gaadhay afar guulood oo xidhiidh ah taas oo keentay in ay gabi ahaanba badaleen halkii ay markii hore ku jireen waxayna sidoo kale keentay in 3 gool oo kaliya laga soo dhaliyay kulamadan isla markaana ay 15 gool iyagu soo dhaliyeen.
Frank Lampard ayaa xili ciyaareedkan inta badan muhiimada soo siinayay ciyaartoyda da’yarta ah, laakiin markii ay xalaadu ku xumaatay waxa uu ku qasbanaaday in uu gaar u la baxo ciyaartoyda khibrada leh oo uu si buuxda uga dalbaday in ay isku taagaan badbaadinta kooxda.
Kadib markii ay qaab ciyaareed fiican ku soo jireen da’yarta kala ah Tammy Abraham, Mason Mount iyo Fikayo Tomori waxa uu Lampard doortay in uu cadaadiska saaro ciyaartoyda waa wayn ee khibrada leh si ay kooxda sare ugu qaadaan.
Chelsea ayaa kulanka soo socda soo dhawayn doonta kooxda Newcaslte United oo kalsooni badan ka heshay guuldaradii ay Man United baday kulankii ugu danbeeyay.